08 Dec 2019 | आइतबार, २२ मंसिर, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
कोहलपुर तनावग्रस्त (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । कोहलपुरबाट नेपालगन्ज जाँदै गरेको ट्रकले ठक्कर दिँदा एक स्कुले बालिका सख्त घाइते भएकी छन् । प्रहरीका अनुसार ना २ख ९४५९ नम्बरको ट्रकले आइतबार बिहान करिब साढे १० बजेतिर स्थानीय त्रिभुवन माध्यामिक बिद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति चन्दलाई ठक्कर दिएको हो । विस्तृतमा
उत्तरपुस्तिका साटेकाे अभियाेगमा त्रिविका चार जना विरुद्ध मुद्दा दायर
बस्ती व्यवस्थापनकाे माग गर्दै वीरगञ्जमा छैठाैं दिन आन्दोलन
बंगलादेशविरूद्धकाे खेलमा नेपालकाे १ गाेलकाे अग्रता
गौरिका सिंहले जितिन् तेस्रो स्वर्ण
ठूलालाई पनि कानून लाग्छ : महान्यायाधिवक्ता
कैदीलाई कार्पेट !
रक्सी र गाँजाकाे तालमा छिमेकीले बलात्कारपछि हत्या गरेकाे पुष्टी
लेखनाथ । पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी पक्राउ परेका छन् ।
बसको पछि ट्याक्सीको भाडा बढ्यो, एक किलोमिटरमा कति ?
सरकारले बस सगँ ट्याक्सीको पनि असोज ७ आइतबारदेखि लागु हुने गरी ट्याक्सी भाडामा वृद्धि गरेको छ । यातायात व्यवसायी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । विभागले हालको भाडामा १० प्रतिशत बढाएर भाडादर सार्वजनिक गरेको छ ।
पोखरामा १० बर्षिया बालिकाको बलात्कार पछि हत्या, हत्यामा संलग्न पक्राउ
पोखरा । मंगलबार बिहान मृत भेटिएकी पोखरा महानगरपालिका २२ पुम्दीभुम्दी कोदीकी श्रेया विकको बलत्कार पछि हत्या भएको पोष्टमार्टम रिपोटले देखाएको छ ।
यस वर्ष बालकरामले छेडे जिब्रो
भक्तपुर । मध्यपुर थिमी नगरपालिका–५ चोडेका ४० वर्षीय बालकराम श्रेष्ठले जिब्रो छेडेका छन् । उनले मङ्गलबार राति ८ बजे मध्यपुरथिमी नगरपालिका दिगु भैरव मन्दिरको मण्डपमा जिब्रो छेडेका हुन् । विसं २०६३ देखि रोकिएर गत वर्षदेखि शुरु भएको थिमीको जिब्रो छेड्ने जात्रालाई निरन्तरता दिन यस वर्ष उनले हजारौं । मानिसको अगाडि जिब्रो छेडेका हुन् ।
पुम्दीभुम्दीमा १० वर्षीया बालिका मृत अवस्थामा फेला, बलात्कारपछि हत्या भएकाे अाशंका
पोखरा । बिस्कुट किन्न सोमबार साँझ घरबाट निस्केकी पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया सुनार मगंलबार बिहान घरनजिकै मृत अवस्थामा भेटिएकी छन् ।
प्रदेश ७ लार्इ 'सुदूरपश्चिम' नामाकरण गर्न सिफारिस
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
वडा अध्यक्ष भण्डारी भरतपुर महानगरपालिकाकाे प्रवक्ता नियुक्त
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको १९ औं बैठकले महानगरपालिकाको प्रवक्तामा अरुण पीडित भण्डरीलाई नियुक्त गरेको छ ।
काठमाडौँ । धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन रु दुई अर्बमा बनाउन छनोट गरेर पुरस्कृत गरिएकामा सांसदले विरोध जनाए ।
कागजमा मात्रै तोडियो यातायात एकाधिकार
काठमाडौँ । कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिए पनि व्यवहारमा यथावत् रहेकाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।
भारतमा रहेको जलविद्युत्को बाँध खोलेपछि सतर्क हुन आग्रह
बैतडी । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा अवस्थित धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध आज बिहान पुनः खोलिएको छ ।
यस्ता रहेका छन् स्वास्थ्य र पोषण टिप्सहरु !
काठमाडौं । स्वास्थ्य र पोषण एक–अर्कासँग सम्बन्धित विषय हरुन् । पोषणलाई लिएर भेरैजसो मानिस भ्रममा हुन्छन् । शिक्षित मानिससमेत कतिपय अवस्थामा स्वस्थ्य र पोषणबारे विपरित धारणा बनाइरहेका हुन्छन् ।
यस्तो रहेको छ आइतबारको तपाईको भाग्य–मंसिर २२ गते
विहान खाली पेटमा तातो पानी पिउँदा अनगिन्ती फाइदा
रुखमा किन पोतिन्छ सेतो र रातो रङ्ग ?